Maraoka–Madagasikara : namaritra tetikasa maro ny mpandraharaha avy any Maraoka | NewsMada
Maraoka–Madagasikara : namaritra tetikasa maro ny mpandraharaha avy any Maraoka
Noraisin’ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, Chabani Nourdine, omaly, ny delegasiona maraokanina. Fiaraha-midinika teo amin’izy ireo ny famaritan’ny mpandraharaha avy any Maraoka hampiasa vola eto Madagasikara amina sehatra maro.
Sehatry ny indostria, fambolena, jono, fotodrafitrasa. Tetika mahakasika ireo sehatra ireo ny nampahalalana tamin’izany fihaonana izany. Tetikasa iray lehibe amin’izany ny fotodrafitrasa, ny hanomezan-danja ny lakandranon’i Pangalana. Efa nisy sonia vita momba io lakandrano io ny 21 novambra 2016, nandritra ny fandalovan’ny mpanjakan’i Maraoka, Mohamed VI, teto an-toerana. Ny mpanjaka Mohamed VI ihany no nandefa ho iraka ireo delegasiona ireo. Azo lazaina fa tsy vahiny eto amin’ny firenena ny sasany amin’izy ireo, izay efa roa volana eto nanao fanadihadiana mahakasika sehatra maro.
Misy ny fiaraha-miasa amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin’izay hatao rehetra. Antony nifampiresahan’izy ireo tamin’ny minisitra Chabani Nourdine, miandraikitra ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, izany. Nanamarina ny asa efa natao ny filohan’ny delegasiona, Saïd Zarrou.
Momba ny lakandranon’i Pangalana manokana, asa maika ny fanajariana izany lakandrano izany, hahazoana mampiasa azy. Tanjona ny ho fampiroboroboana ny fambolena any amin’ny faritra manodidina. Faritan’ireo mpandraharaha avy any Maraoka ireo koa ny fahazoana manodim-bokatra any anivon’ny faritra misy azy, izany hoe, hampitombo ny tombontsoa azo avy amin’izany vokatra izany.
Mahafaly ny minisitra Chabani Nourdine izao fifantohan’ny mpanjakan’i Maraoka eto Madagasikara izao, amin’ny alalan’ny tetikasa maro nofaritana eto an-toerana. Fiaraha-miasa hisian’ny fifanakalozana traikefa, indrindra eo amin’ny fanajariana ny lakandrano. Nambaran’ny minisitra ihany koa fa hitohy any amin’ny faritra maro ny tetikasan’ireo vahiny ireo, indrindra ny any avaratra sy ny any atsimo. Marihina anefa fa miankina betsaka amin’ny fahavononan’ny eto an-toerana koa izany, fanjakana na ny mpandraharaha avy amin’ny sehatra tsy miankina, indrindra ny mpanao politika mba tsy hanakorontana.